အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ မသန္တာလှိုင်ပြောပြတဲ့ အကြံပြုချက် (၃) ချက် -
Posted on March 13, 2019 March 13, 2019 Author Stella	Comment(0)
ယောင်းတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်စေဖို့ မသန္တာလှိုင်က ဘယ်လိုအကြံပေးသွားလဲ
ယောင်းတို့ရေ…လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက မသန္တာလှိုင်နဲ့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနက ကျင်းပတဲ့ “So What” campaign လေးမှာ ကြုံတုန်းဆုံတုန်း စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မသန္တာလှိုင်ကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်တယ်ထင်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးမေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ မသန္တာလှိုင်က သူ(မ)ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကို ဒီလိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
အရင်ဆုံး သူများက ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်မလဲ၊ သူများတွေ ကိုယ့်ဆီက ဘာတွေမျှော်လင့်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်စေချင်မလဲဆိုတာ ခေါင်းထဲမထည့်ဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲ ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး ဒါကိုလုပ်လိုက်ရင် ကိုယ်တကယ်စိတ်ချမ်းသာမှာလား၊ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်သွားမှာလားဆိုတာ ဦးစားပေးပြီးတွေးပါ။
Related article>>>ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလာဖို့ ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ရမလဲ?
သူတစ်ပါးကို ဘာပဲလုပ်ပေးပေး တန်ပြန်မျှော်လင့်ချက်မထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်လို့ သူစိတ်ချမ်းသာသွားရဲ့လား ၊ ကျေနပ်သွားရဲ့လား ၊ ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးတင်မှာလားစတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့ရင် ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်မတုန့်ပြန်ဘူးဆို ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲရမှာမို့လို့ပါ။ ကူညီစရာကူညီပြီး ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ ပြန်မထားတဲ့အခါ ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တာနဲ့ နှစ်တာ တခြားစီပါ။ ကိုယ်ကတစ်ယောက်တည်းနေရတာ အားငယ်နေတတ်တယ်၊ အမြဲတမ်းအားကိုးစရာတစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာနေတတ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အတွက် ကိုယ်ကလုံလောက်ရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အချိန်ပေးပါ။ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ လမ်းစတစ်ခုပါပဲ။
Related article>>>ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေမည့် တိကျသေချာသော နည်းလမ်း(၄)သွယ်
ကဲ…ဒီအချက်လေးတွေကတော့ မသန္တာလှိုင်က ယောင်းတို့အတွက် ပြောပြပေးသွားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်နည်းလေးတွေပါ။ ယောင်းတို့လည်း ဒီအချက်လေးတွေကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်တတ်တဲ့ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေနော်။
Photo credit>>> Thandar Hlaing Facebook
ယောငျးတို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျစဖေို့ မသန်တာလှိုငျက ဘယျလိုအကွံပေးသှားလဲ
ယောငျးတို့ရေ…လှနျခဲ့တဲ့ရကျတှတေုနျးက မသန်တာလှိုငျနဲ့ ပှဲတဈခုမှာ ကွုံတုနျးဆုံတုနျး စကားစမွညျပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။ မသန်တာလှိုငျကို အမြိုးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျဖို့ ဘာတှလေိုအပျတယျထငျလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးမေးဖွဈခဲ့တဲ့အခါ မသန်တာလှိုငျက သူ(မ)ရဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးတှကေို ဒီလိုဝမြှေခဲ့ပါတယျ။
အရငျဆုံး သူမြားက ကိုယျ့ကိုဘယျလိုထငျမလဲ၊ သူမြားတှေ ကိုယျ့ဆီက ဘာတှမြှေျောလငျ့လဲ၊ ဘာတှလေုပျစခေငျြမလဲဆိုတာ ခေါငျးထဲမထညျ့ဘဲ ကိုယျဖွဈခငျြတာ ဘာလဲ ၊ ကိုယျလုပျခငျြတာ ဘာလဲဆိုတာ စဉျးစားဆုံးဖွတျပွီး ဒါကိုလုပျလိုကျရငျ ကိုယျတကယျစိတျခမျြးသာမှာလား၊ ပြျောရှငျကနြေပျသှားမှာလားဆိုတာ ဦးစားပေးပွီးတှေးပါ။
Related article>>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျနိုငျဖို့ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ သိလာဖို့ ဘာတှကေို ပွငျဆငျရမလဲ?
သူတဈပါးကို ဘာပဲလုပျပေးပေး တနျပွနျမြှျောလငျ့ခကျြမထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျလုပျပေးလိုကျလို့ သူစိတျခမျြးသာသှားရဲ့လား ၊ ကနြေပျသှားရဲ့လား ၊ ကိုယျ့ကိုကြေးဇူးတငျမှာလားစတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှရှေိခဲ့ရငျ ကိုယျမြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျး ပွနျမတုနျ့ပွနျဘူးဆို ကိုယျပဲစိတျဆငျးရဲရမှာမို့လို့ပါ။ ကူညီစရာကူညီပွီး ဘာမြှျောလငျ့ခကျြမှ ပွနျမထားတဲ့အခါ ကိုယျလညျးစိတျခမျြးသာရတာပေါ့။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတာနဲ့ နှဈတာ တခွားစီပါ။ ကိုယျကတဈယောကျတညျးနရေတာ အားငယျနတေတျတယျ၊ အမွဲတမျးအားကိုးစရာတဈယောကျယောကျကို ရှာနတေတျတယျဆိုရငျ အဲ့ဒါကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျအတှကျ ကိုယျကလုံလောကျရဲ့လားဆိုတာ စဉျးစားပါ။ ကိုယျ့အတှကျကိုယျအခြိနျပေးပါ။ တဈယောကျတညျးနရေတဲ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျလေးတှကေို တနျဖိုးထားတတျလာပွီဆိုရငျတော့ ဒါကကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျဖို့ လမျးစတဈခုပါပဲ။
Related article>>>ကိုယျ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ အမွငျ့ဆုံးဖွဈစမေညျ့ တိကသြခြောသော နညျးလမျး(၄)သှယျ
ကဲ…ဒီအခကျြလေးတှကေတော့ မသန်တာလှိုငျက ယောငျးတို့အတှကျ ပွောပွပေးသှားတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြနညျးလေးတှပေါ။ ယောငျးတို့လညျး ဒီအခကျြလေးတှကေိုဖတျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြတတျတဲ့ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ အမြိုးသမီးတှဖွေဈကွပါစနေျော။
Tagged Interview, self love, Thandar Hlaing, tips
“ကိုယ့်ကလေးကို စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဖြည့်ပါ” လို့ဆိုတဲ့ မနန်းအိအိမွန်
Posted on September 6, 2018 September 6, 2018 Author Sugar Cane
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုရေးရာ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ မြန်မာပြည်က မိခင်တွေ၊ အိမ်ထောင်ရှင်တွေ၊ သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေ၊ အမှီခိုကင်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် သုတရသတွေပေးနိုင်ဖို့ How She Did It ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကို ထောင်ထားသူ မနန်းအိအိမွန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
အဆင်မပြေတာတွေ များလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ဖို့ ကြိုးစားပြီးမှ အောင်မြင်မှုကို ပြန်ပြီး ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့ မဧပရယ်လ်ခင်
Posted on January 15, 2019 Author Wathun
သူ(မ)လို အခြေအနေမျိုးနဲ့သာ ကြုံလာခဲ့ရင် ယောင်းဆိုရင်ရော ဘာလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
Posted on June 13, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
‘မိန်းကလေးမို့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပြီး ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကိုထည့်လိုက်ပါ။”ဆိုတဲ့ မဖီဘီဟန်